Khin Maung Chin: ယုံကြည်ခြင်းတရား
လောကကြီးမှာလူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ်ပိုင်ဟန် နဲ့ကိုယ်ပိုင်အမြင်တွေရှိကြတာချည်းပဲမို့ ယုံကြည်ချက် ၊ ယူဆချက် ၊ တွေးဆချက် တွေဟာလည်း အမျိုးမျိုး ရှိနေကြမှာပါ …. ။ အဲဒီလိုအမျိုးမျိုးရှိနေကြတာကိုကလူ့လောကရဲ့အနှစ်သာရတစ်ခုလို့
ကျနော်မြင်မိသလိုအားလုံးလည်းမြင်မိကြမှာပါပဲ။ယုံကြည်ချက်တွေ၊ယူဆချက်တွေ၊တွေးဆချက်တွေ ဘယ်လိုပင်ကွဲပြားခြားနားပါစေ..တစ်ခုတည်းသောအရေးကြီးဆုံးကမိမိယုံကြည်မှုအပေါ် တန်ဖိုးထားတတ်ရပါမယ် …. အဲဒါအရေးအကြီးဆုံးပါ။
ကိစ္စတစ်ခုအပေါ်ခံယူပုံ၊သုံးသပ်ပုံကွဲပြားကြတယ်ဆိုတာကမိမိတွေ့ကြုံဖြတ်သန်းလာတဲ့အခြေအနေ ပေါ်မှာမူတည်ပြီးလားရာမတူညီခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေတာပါ ……။ ဥပမာပေးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီခေတ်ကြီးမှာလူတိုင်းနီးနီးအနည်းဆုံးအခြေခံလောက်
ထိတော့သင်္ချာပုစ္ဆာတွေနဲ့စစ်ထိုးခဲ့ဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ဒီပုစ္ဆာတွေဟာဘယ်လိုပဲရှုပ်ထွေးနေပါစေ၊ ခက်ခဲနေပါစေသက်ဆိုင်တဲ့သီအိုရီတွေ၊အထောက်အထားတွေနဲ့အဆင့်ဆင့်တွက်ချက်လာပြီးတဲ့ နောက်မှာတော့အဆုံးသတ်အနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့အဖြေ
တစ်ခုဆိုတာအသင့်ရှိနေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ပုစ္ဆာတွေကွဲပြားနေသလိုအဖြေတွေကွဲပြားမနေပါ။ လူပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှင်တွေခြားနားနေလို့အဖြေတွေခြားနားမနေပါ။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အားလုံးအဖြေကြိုတင်ရှာလို့မရတာ၊လက်ခံနိုင်လောက်တဲ့အဆုံးသတ်တွေ
မဲ့နေတာလည်းရှိပါတယ်..အဲဒါကတော့လူ့ဘဝပုစ္ဆာတွေပါပဲ။ လူ့ဘဝပုစ္ဆာဆိုတာပြသနာပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင်မကများပြားလွန်းလှတာမို့ ဘယ်လိုပညာရှင်ကမှကြိုတင်မသိမြင်နိုင်ပါဘူး...။ပြည့်စုံအောင်မပြင်ဆင်နိုင်ပါဘူး။
စောစောကပြောထားသလိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်ချက်၊ကိုယ်ပိုင်ယူဆချက်၊ကိုယ်ပိုင်တွေးဆချက်တွေရဲ့အင်အားနဲ့ပဲ လတ်တလောကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေ၊အခြေအနေတွေ၊အဖြစ်အပျက်တွေ..အားလုံး... အားလုံးကိုရုန်းကန်ဖြေရှင်းသွားကြရမှာပါ။အဲဒီလိုဖြေ
ရှင်းကြဆိုရင်လည်းကိုယ်ဖြစ်ချင်နေတဲ့ဆန္ဒနဲ့ လိုက်ဖက်မှု့ရှိနိုင်မယ့်ရလဒ်တစ်ခုဖြစ်လာအောင်သတိပြုပြီးဖြေရှင်းကြတာကိုအားလုံး (သတိမထားမိရင်သာနေမယ်)တွေ့ဖူးကြမယ်လို့ကျနော်ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာပြောစရာရှိလာတာကကိုယ်သန်ရာသန်ရာကိုယ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပုစ္ဆာတွေကို ဖြေရှင်းရင်းနဲ့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေအနေနဲ့ကာယကံရှင်တွေကို ပျော်ရွှင်ဖွယ်ဖြစ်လာအောင်၊ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှု့ပေးနိုင်တာတွေလည်းရှိကြသလို စိတ်ပျက်အားငယ်လာအောင်ဖိအားပေးရတာတွေလည်း
ရှိတတ်ကြပါတယ်။ဒါကိုကျနော်တို့လက်ခံကြရမှာပါ..။ ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ခါပြုံးရွှင်ကြည်နူးနိုင်အောင်မိမိကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းနည်းကလုပ်လိုက်စေတာလဲ ဆိုတာသတိတရလက်ခံထားမိရင်နောက်အကြိမ်ပေါင်းများစွာအဲဒီလိုပျော်ရွှင်ကြည်နူးမှု့တွေကို
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေလို့အဆင်ပြေမှာပါ။တစ်ဖက်ကလည်းခုလိုစိတ်ပျက်ဖွယ်၊အားငယ်ဖွယ်တွေကို ဘာကြောင့်ကိုယ်ခံစားရတာလဲဆိုတာကိုစစ်စစ်ပေါက်ပေါက်မဟုတ်တောင်အပေါ်ယံ ယေဘုယျအားဖြင့်ချင့်ချိန်နိုင်ခဲ့ရင်လည်းနောင်ဆိုဒီလိုစိတ်ပျက်အား ငယ်စရာတွေကြုံတွေ့ရဖို့လမ်းစနည်းသွားမှာအမှန်ပါပဲဗျာ။
ကျနော်တို့အားလုံးရှင်သန်နေကြတဲ့သံသရာတစ်လျှောက်လုံးကျနော်တို့အချင်းချင်း ကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့တာလည်းရှိမယ်၊၊ ဥပမာဆိုရရင်....တချို့ကကိုယ့်ထက်အားနည်းတဲ့သူတွေကိုလိုအပ်သလို
ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာတွေ၊တချို့ကသူများဒုက္ခရောက်တော့မယ့်အခြေအနေတွေကို တတ်နိုင်သလောက်ဖယ်ရှားပေးခဲ့တာတွေ၊ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပေါ့ဗျာ.... အဲလိုလေးတွေနဲ့ကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့ကြသလိုပဲသူများနစ်နာအောင်လိမ်ညာလိုက်တာတွေ၊ လှည့်ဖြားလိုက်တာတွေ၊သူများကြပ်တည်းသွားအောင်ကိုယ်ပိုင်ရာဂွင်ထဲကနေပညာပြလိုက်ကြတာတွေ စတဲ့မကောင်းခြင်းတွေလည်းလုပ်ခဲ့ကြမှာပါပဲ။ဒီနေရာမှာ''လူမှန်ရင်အပြစ်နဲ့မကင်းဘူး'' ဆိုတဲ့စကားကတနည်းတဖုံဘောင်ဝင်လာပြန်ရော..
ထားပါ...ပြောချင်တာကအဲဒီလိုကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့ကြသလို၊မကောင်းတာတွေ လုပ်ခဲ့ကြတာကြောင့်လည်းမဆုံးနိုင်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေသူတလှည့်ကိုယ်တလှည့်ဖြစ်နေ ပျက်နေတယ်ဆိုတာပါပဲ။တကယ်တမ်းဖြစ်ပျက်လာကြပြီဆိုရင်လည်းလူတစ်ဦး
နဲ့တစ်ဦးရှုမြင်သုံးသပ်တာ၊ခံယူမှတ်သားတာ၊ခွင့်လွှတ်နားလည်တာတွေဟာမတူညီနိုင်ကြပြန်ပါဘူး ……။ နောက်ပြီးမဖြစ်မနေတွေ့ကြုံလာရတဲ့နောက်ဆက်တွဲရလဒ်တွေအပေါ်တုံ့ပြန်ပုံမှာလည်း တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးကိုယ်ပိုင်စိတ်ခံစားချက်၊အပြုအမူတွေအရကွဲပြားခြားနားနေကြမှာပါ ……။ ကိုယ်တွေ့ကြုံခံစားလိုက်ရတဲ့သဘောတရားအတိမ်အနက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးမတူညီခြင်းတွေ ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။အဲလိုမတူညီတာကလည်းဘာပြသနာမှမရှိလောက်ဘူးလို့ပြောပါရစေ။ ဒီအချက်ကိုအားလုံးလက်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ တစ်ခုတော့သတိထားရမှာပေါ့ဗျာ...အဲဒီတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့လူတစ်ဖက်သားရဲ့ခံစားချက်ပါပဲ.. အဲဒီခံစားချက်ကိုနားလည်ပေးနိုင်ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ အတတ်နိုင်ဆုံးမိမိရဲ့''ငါဖို့''ဆိုတဲ့အတ္တကိုဘေးဖယ်ထားပြီး
ထဲထဲဝင်ဝင်နားလည်ပေးနိုင်အောင်လည်းကြိုးစားကြရမှာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့လောကကြီးမှာမိမိကိုယ်ကိုဗဟိုပြုပြီးဘယ်အရာမှဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲနေတာ မဟုတ်တာ ….အရာရာဟာအခြေအနေ၊အချိန်အခါအရဖြစ်ပျက်နေကြတာမို့''ငါ'' ဆိုတဲ့အတ္တကို
ဖယ်ခွါပြီးတစ်ဖက်သားအပေါ်ရှုမြင်ပေးနိုင်ရင် ''နားလည်မှု'' ဆိုတဲ့တစ်ဖက်လူရဲ့ခံစားချက်ကိုတွေ့ထိသိမြင်နိုင်မှာမလွဲပါဘူးဗျာ။
အချိန်ဆိုရင်တိတိကျကျသိနိုင်ဖို့ခဲယဉ်းပါတယ်။ဒါပေမယ့်အသိစိတ်ပျောက်သွားကြတယ်လို့အများစု လက်ခံထားကြတဲ့အရက်သေစာသောက်စားထားတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုရင်တော့တိတိကျကျသိနိုင်ပါတယ်..။ ဘယ်လိုပြောမလဲ...ကလေးလေးတွေဟန်မဆောင်
တတ်သလို၊မလိမ်မညာတတ်သလိုပေါ့...မူးနေတဲ့သူတွေလည်းကျနော့်အတွေ့အကြုံအရဆိုရင် မလိမ်မညာတတ်ပါဘူး။ဒါလည်းတချို့သတိထားမိမှာပါ။အဲလိုမူးယစ်နေတဲ့အချိန်မှာမလိမ်မညာပဲ ရင်ထဲကအသိတွေ၊ခံစားချက်တွေကိုထုတ်ဖော်တတ်ကြလွန်းလို့လည်း
လူတွေဟာနောက်လူတစ်ယောက်ရဲ့အတွင်းလျှို့ဝှက်ချက်ကိုသိချင်ရင်အရက်မူးအောင် တိုက်လေ့ရှိကြတာမဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျာ?မူးလာမှကိုယ်သိချင်တာတွေမှန်မှန်ကန်ကန်၊ တိတိကျကျသိလာကြမှာလို့ယူဆထားကြလို့မဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျာ? ဒါကြောင့်လည်း
စကားပုံမှာတောင် ''အရက်မူးကျွဲခိုးပေါ်'' ဆိုပြီးဆိုကြတာမဟုတ်ဘူးလားဗျာ?...ဒါကကျနော့်ယုံကြည်ချက် (လူတိုင်းဟာမိမိခံစားချက်အတိုင်းအရာရာကိုတုံ့ပြန်ပြုမူတတ်ကြတယ်)ကိုခိုင်မာအောင် ကျနော့်အတွေးသေးသေးလေးနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကိုးကားပြတာပါ။
မသင့်တော်သလိုဖြစ်သွားရင်ကျနော်အမိုက်အမဲလေးကိုနားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါလို့ တောင်းပန်ချင်ပါတယ်။ကျနော်တို့အားလုံးငယ်ငယ်ကတည်းကတက်ရောက်ပညာ သင်ကြားလာခဲ့ကြတဲ့ကျောင်းတွေ၊စာသင်ခန်းတွေမှာတော့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျင့်စာရိတ္တ
လမ်းညွှန်ချက်တွေ၊ဘယ်သူ့ကိုဘယ်လိုဆက်ဆံရမှာ....စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတွေကို ဘယ်လိုမွေးမြူရမှာ...စတဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေ၊လူကောင်း၊လူညံ့ရွေးချယ်ပေါင်းသင်းရေးနည်းလမ်းတွေ၊ ကုသိုလ်..အကုသိုလ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတတ်ပြီးဆောင်ရန်..ရှောင်ရန်တွေ
စသည့် စသည့်အခြေခံသဘောတရားတွေကိုတော့ အစအလယ်အဆုံးသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေ၊စည်းတွေဘောင်တွေထဲကနေပြီး အစီအစဉ်တကျနဲ့သင်ကြားပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။တကယ့်လက်တွေ့ဘဝမှာတော့သင်ယူနေကြဆဲပေါ့ဗျာ..။ ဘယ်လိုလူသားဆီမှာမှ
ကိုယ်မလိုချင်တဲ့ကဏ္ဍတွေကိုထုတ်နုတ်ပြီးကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတွေပဲ တန်းစီဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်စွမ်းအားမရှိပါဘူး။ဖြစ်လာနေတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာသာ ချိုတယ်၊ငံတယ်၊ခါးတယ်မခွဲခြားပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လျှောက်လှမ်းသွားကြရမှာပါ။
အဲဒီလိုအရသာအမျိုးမျိုးကိုမြည်းစမ်းနိုင်ဖို့လည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြရမှာပါ။ ပြင်ဆင်ထားကြရမယ်ဆိုလို့တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး..။ လူအချင်းချင်းထားအပ်တဲ့ကိုယ်ချင်းစာတရားတွေ၊အပြန်အလှန်လေးစားအပ်တဲ့ ဆက်ဆံမှု့တွေကိုရှိနေရင်ရပါပြီ။ဒါဆိုရင်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိပဲ
ကြုံသလိုရိုးရိုးသားသားလျှောက်လှမ်းနေကြရတဲ့လောကကြီးမှာ အဖြေမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရတဲ့ဘဝပုစ္ဆာတွေဟာကျနော်တို့အတွက်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကြီး ဖြစ်မနေတော့ဘူးမဟုတ်ပါလားခင်ဗျာ?အဲဒီဘဝပုစ္ဆာတွေကတော့ကမ္ဘာတည်နေသရွေ့ ကျနော်တို့လူသားတွေနဲ့မခွဲပဲအမြဲတမ်းအတူတကွရှိနေဦးမှာမို့.......................။
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူးခုတလောနေရထိုင်ရတာမျိုးကြီးဖြစ်နေလို့ခုလိုပေါက်ကရလေးတွေ ချရေးလိုက်တာပါ။နော်ဝေအကြမ်းဖက်မှု့ကြောင့်အနေခက်သလိုမျိုးဖြစ်မိလို့ နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးအနေနဲ့သူတို့သဘောထား(ကျနော်နှင့်သိတဲ့သူများ)ကိုသူတို့အရက်မူး
နေတဲ့အချိန်မှာမသိမသာတီးခေါက်ကြည့်မိတော့လူလူချင်းလေးစားတတ်တဲ့သူတို့ရဲ့ သဘောထားအမှန်ကိုသိခွင့်ရလိုက်တယ်လေ။တချို့စုန်းပြူးတွေတော့ရှိမှာပေါ့ဗျာ... ဒါကသူတို့ရယ်လို့မဟုတ်ပါဘူး...ကျနော်တို့မြန်မာပြည်မှာလည်းရှိကြပါတယ်။ခုနကပြော
Aug 11, 2011, 7:56:00 PM
ရိုးသားခြင်း၊ ကိုယ်ချင်းစာခြင်း ၊ လေးစားခြင်း ဒါတွေက မရှိမဖြစ် ကျင့်ဝတ်တွေပေါ့ရှင်။
Aug 11, 2011, 10:43:00 PM
Aug 12, 2011, 2:38:00 AM
မှန်တာပေါ့ မှန်တာပေါ့ အကိုရေ..
Aug 12, 2011, 4:40:00 AM
"ငါ" ဆိုတဲ့ အတ္တကို ခုချိန်ထိတော့ အပြီးသတ် မဖယ်ရှားနိုင်ပေမယ့် အဲဒီ့ အတ္တကြောင့် သူများဒုက္ခမရောက်စေအောင်တော့ နေပါတယ်အစ်ကို...
Aug 12, 2011, 9:27:00 AM
လူတိုင်းတော့ ငါ့ ဖို့ဆိုတဲ့ အတ္တ
အပြီးသတ်တော့ ဖယ်ရှားနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးနော်...
Aug 12, 2011, 11:18:00 AM
@မဒမ်ကိုးရေ....လေးစားပါတယ်ဗျာ။@ညီမချိုချဉ် ရေ...(ရေမခပ်လာနဲ့နော်:P) ကျနော်လည်းညီမလိုပါပဲ..ကြိုးစားဆဲ့အဆင့်လို့ ဝန်ခံချင်ပါတယ်။ ခုထိတော့နေနိုင်သေးတယ်ထင်တာပဲ..အဟိ။@မကြီးဂျပ်စ်မင်းပြောတာ သိပ်လက်ခံတာပေါ့ဗျာ.လူပဲလေ..။အားလုံးခုလိုအမြင်လေးတွေထုတ်ဖော်ပြလာတော့ ကျနော်ရေးတဲ့စာကိုတောင်ကျနော်ပြန်ရှက်မိသလိုလိုပါပဲဗျာ..ဟဲဟဲဟဲ။ @ကျေးဇူးပဲသူငယ်ချင်းတို့ရေ။ကျေးဇူး။
Aug 12, 2011, 8:07:00 PM
မှန်လဲမှန် ..ဟုတ်လဲဟုတ်နေတယ် ချင်းလေးရေ..